कामरेडको नेपालपथ- हामी झुट र फरेवको कुनै सहारामा जानु हुँदैन — News of The World
श्रीलङ्काली कैदीले आधारभूत अधिकार नपाएको ः राष्ट्रसंघ
सोनीया गान्धीद्वारा अवकाश घोषणा
मन्त्री दहितमाथि अख्तियारको छानविन
प्रदेशमा ‘थ्रेसहोल्ड’ कटेपनि समानुपातिकतर्फ अन्योल
श्वास प्रश्वासजन्य रोगबाट हरेक वर्ष साढे ६ लाखको मृत्यु
संसद्का कर्मचारी प्रदेश सभामा जान अनिच्छुक
शसस्त्र प्रहरी भित्र लत्ताकपडा खरिदमा कमिशनको लफडा
सन्तोष शर्माआषाढ २, २०७४
‘कामरेडहरू आज हामी विशिष्ठ घडीमा छौँ । माओवादी आन्दोलनको जगमा स्थापित अधिकारहरू संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छौँ, त्यहि प्रक्रियाअन्तर्गत हामी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको संघारमा पनि छौँ । हाम्रा अगाडि प्रमुख अतिथि कमरेड वीरध्वज आइपुग्नु भएको छ । अब म कमरेड वीरध्वजलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ कमरेड सुयोगले उद्घोषण गरे । सहभागीहरूले ताली परर पारे ।
‘कार्यक्रमको विशिष्ठ आतिथ्यताका लागि म अब क. रोहितराजलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु’ यसैगरी विशिष्ठ अतिथिहरूमा कमरेड संघर्ष, कमरेड चुनबहादुर, कमरेड धिरज र क. पटेललाई अनुरोध गर्दछु’, कामरेड उद्घोषकले क्रमशः नाम बोलाइन् ।
‘सहिद परिवार र बेपत्ता तथा घाइते योद्धाको नाम ‘न’ पनि लिनु भएन नी !’ सहिद परिवारलाई नसम्झेकोमा कामरेड प्रमिसाले आक्रोश व्यक्त गरिन् ।
‘कमरेडहरू हामी बोलाउने क्रममै थियौँ… अब म कमरेड ध्रुवलाई सहिद परिवारको तर्फबाट, कमरेडसविनालाई बेपत्ता परिवारका तर्फबाट र कमरेड सुवासलाई घाइते अपाङ्ग योद्धाको तर्फबाट मंचमा आसनग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु ।’ कमरेड उद्घोषकले नाम थपिन् । ‘अब म कमरेड बलभद्रलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु’ कमरेड सुयोगले बोलाइन् ।
‘प्रमुख अतिथि कमरेड विशिष्ट अतिथि कमरेडहरू र अतिथि कामरेडहरू.. आज यो एतिहासिक सम्मेलनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण कामरेडहरूमा जुझारु सलाम अर्पण गर्दछु । साथै यस अबसरमा आफ्ना केही भनाइ राख्ने अनुमति माग्दछु’ कामरेडले अनुमति मागे, हलबाट ताली बज्यो ।
‘कामरेडहरू आज हामीले (१) स्थानीय तहको निर्वाचन, (२) निर्वाचनमा ऐजेण्डा तय, (३) उम्मेदवार छनौट विधि लगायतका बुँदामा छलफल गर्नेछौँ… त्यस बाहेकका कुनै ऐजेण्डा छन भने कामरेडहरूले कृपया थप्न सक्नुहुनेछ’, कामरेड सहदेवले ऐजेण्डा फ्लोर गरे । ‘अब म विशिष्ट अतिथि कमरेडलाई समसामयिक प्रशिक्षणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु’, कमरेड उद्घोषकले अनुरोध गरिन् ।
कामरेडहरू आज हामी सामान्यतः वर्ष गन्दा दुई दशकपछि र विशिष्टताको हिसाबले हेर्दा असाध्यै महत्वपूर्ण समयमा यो निर्वाचनमा भाग लिदैछौँ । हाम्रो बलले प्राप्त गरेको र हामीले नै जोगाउनु पर्ने गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशीता, धर्म निरपेक्षता र अधिकार विकेन्द्रिकरण जस्ता सवाल हाम्रा लागि अहम छन् । उपलब्धि संस्थागत गर्ने अवसरको रुपमा हामीले लिएर पुरै तागत यतातर्फ लगाउन पनि जरुरी भएको छ । अरु दलका उम्मेदवार जस्तो भोटका लागि भोटमात्रै तान्ने र चुनावमा जे पनि बोल्ने काम गरिहाल्न हामीलाई जरुरी छैन । गलत संस्कारलाई सच्याउने प्रयत्न र पहल हामीले नगरेदेखि अरु कसैले गर्ने वाला छैन । गाउँको विकास नगरी देशको समृद्धि हुँदैन, जनताको मन नहसाइ लोककल्याणकारी राज्य हुँदैन भन्ने जिम्मेवारपूर्ण सुझबुझ सहित हामी तम्तयार रहनु पर्दछ । यसैगरी हामीसँग रहेका श्रोतसाधनको पहिचान, त्यसको व्यवसायिक उत्पादन, प्रयोग, बजारीकरण, आम्दानी र न्यायिक बजेट विनियोजनको ऐजेण्डाद्वारा नै हाम्रो पार्टी स्थापित हुने हो । विदेशीको गुलामी गर्ने र पुस्तौपुस्ता भिख मागिरहनु पर्ने स्थितिबाट मुक्त गराउने ऐजेण्डा अरुबाट प्राप्त हुँदैन । यद्यपी ढाटढुट गरेर जनतालाई आफ्नो बहकाउमा पार्ने काफी प्रयत्न फेरि पनि हुन्छ नै । तर, हामी झुट र फरेवको कुनै सहारामा जानु हुँदैन । दुई तिहाइ जनता संलग्न भनिएको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान पुगेको कृषि क्षेत्रको हालत नाजुक छ । उत्पादनकर्ताहरू, किसानहरू र साना उद्यमीहरू पीडामा छट्पटिएका छन् । नर्छदा पनि उम्रने र दुईटा ढुंगाको कापमा पनि फल पाउन सक्ने हाम्रो हावापानी र माटोको व्यवसायिकरण गर्ने योजना अघि सार्न तथा योजना निर्माणदेखि बीउ, मल, सिंचाइ, प्रकोप रक्षा, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारको समस्यालाई हामीले चिर्न सक्ने गरी योजना बनाउनु पर्दछ । विद्युतका सम्भावना, पिउने पानीको समुचित व्यवस्था, खेल मैदान, पर्यटकीय सम्भावना, कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र, जडिबुटी पहिचान र प्रशोधन एवम् बजारीकण, बसपार्क, खेल मैदान, बृद्ध बुद्धा हेरचाह केन्द्र, शीसु स्याहार केन्द्रहरू, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्था, सरकारी विद्यालयको प्रभावकारीता र शैक्षिक स्तरीयताको व्यवस्था, वनजंगल, सामूहिक चरन तथा सार्वजनिक उद्यानको व्यवस्था, टेलिफोन, इन्टरनेट, सडक, सिंचाइ, युवाहरूको स्वरोजगारीका लागि तालीम र शसक्तिकरण जस्ता विषयहरू सबैको ऐजेण्डामा पर्छन् नै । तर, यी विषयलाई घोषणापत्र बनाउँदा वस्तुवादी, वैज्ञानिक र विश्वासीलो हुन सक्नु पर्दछ । त्यसैगरी सिंहदरवारबाट गाउँमा ल्याइएका अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग, बजेट निर्माण, घाटा बजेट पूर्तिका उपाय, न्याय सम्पादन, शान्ति सुरक्षा, जनजिविका, शुसासन, मौलिक अधिकारप्रतिको संवेदनशीलता जस्ता विषयमा गम्भीर ध्यान पु¥याउन सक्नु पर्दछ । ‘समृद्ध गाउँ नगर नै समृद्ध नेपालको आधार’ भएकाले कार्यक्रम र योजनालाई नेतृत्व दिन सक्ने व्यक्तित्व हामी बिचबाट चयन गरिनु पर्दछ ।
यसैगरी कामरेडहरूसँग मैले राख्नै पर्दछ की हाम्रो तहमा एकल विजयको स्थिति के हो ? हामी क–ख–ग–घ मध्ये कहाँ पर्छौ वा अरु कुन कुन कहाँ पर्छन् ? त्यसमा सबैभन्दा बढी अन्तरविरोध कुन पार्टीमा छ ? एक्लै लड्दा के हुन्छ र मिलेर लड्दा के हुन्छ ? पार्टी बाहिरका स्वतन्त्र र साझा उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने पो स्थिति छ कि ! मत संरक्षणका लागि उम्मेदवारी दिन वा नपर्ने स्थिति के छ ? यी सबैको आंकलन गरी आन्तरिक निर्देशन अनुसार उम्मेदवार तय गर्नुपर्दछ । सुरक्षा– प्रशासन र सबैतर्फ आवश्यक समन्वय गर्न एवम् प्रचार प्रसारको सामग्री, व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्दछ । यसभन्दा बाँकी बढी कुराहरू अन्य वक्ता कमरेडहरूबाट पाउनु हुनेछ’ प्रमुख अतिथिले मन्तव्य दिए, सहभागीहरूले ताली बजाए ।
ऐक्यबद्धता मासिक वैशाख अंक २०७४